Booliska Ingriiska ayaa furay baaritaan ku saabsan eedeymo loo soo jeediyey Asma al-Assad… – Hagaag.com
Booliska Ingriiska ayaa furay baaritaan ku saabsan eedeymo loo soo jeediyey Asma al-Assad…
Posted on 14 Maarso 2021 by Admin in World // 0 Comments
Wargeyska “(The Times) ee ka soo baxa Britain ayaa sheegay in Asma al-Assad, oo ah xaaska madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, ay wajahi karto maxkamad ka xayuubisa dhalashadeeda Ingriiska, kadib markii booliisku uu furay baaritaan horudhac ah oo ku saabsan eedeymaha loo soo jeediyay ee ah inay kicisay oo ay dhiirigelisay falalka argagixisada 10kii sano ee dagaalka sokeeye ee dalka Suuriya.
Wargeysku wuxuu tilmaamay in booliisku ay fureen baaritaan kadib markii shirkad caalami ah oo ka shaqeysa arrimaha sharciga oo ku taal UK ay soo bandhigtay cadeymo muujinaya Asma al-Assad oo saameyn ku leh dabaqada xukunta iyo taageerada ay siiso ciidamada iyo xoogaga hubeysan.
Toby Cadman, oo ah madaxa shirkadda sharciga oo bixisay cadeymo ka dhan ah Asma al-Assad, ayaa sheegay inuu rumeysan yahay inay jiraan cadeymo adag oo la xiriira maxkamadeynta marwada koowaad, oo tan iyo sanadkii 2012 ay saarneyd cunaqabateyn ay saareen UK iyo EU.
Kooxdayada sharciga ee Guernica 37 waxay si firfircoon u baarayeen arintan mudo dhowr bilood ah, taasna waxay keentay inay laba warqadood oo sir ah u dirto taliska la dagaalanka argagixisada ee adeega booliska ee caasimada, ”ayuu raaciyay. Waa muhiim, annagoo ku dhow sannad-guurada tobnaad ee markii uu dilaacay colaadda Suuriya, sidaa darteed halkaasi waxaa jira ficil wax ku ool ah oo loogu talagalay in lagu hubiyo in kuwa mas’uulka ka ah lala xisaabtamo. “
Baadhitaanku wuxuu ku eedeynayaa Asma al-Assad inay kicinayso argagixisanimo iyada oo u maraysa taageeradeeda aan geed looga soo gaban oo ay siiso ciidamada qalabka sida ee Suuriya.
Sida ay qortay jariidada The Times, uma badna in marwada koowaad ay u hogaansato u yeeritaan kasta oo ka dhan ah ee maxkamadda Britain, mana cadda in dacwad oogeyaasha ay go’aansan doonaan in maxkamad la soo taago iyada oo maqan.
Waxay sheegtay in garsoorka ingiriiska laga yaabo inay soo saaraan waaran casaan ah oo soo qabasho ah oo ka timaada booliska aduunka (Interpol) ee Asma al-Assad, taasoo ka dhigaysa mid u nugul qabashadeeda hadii ay u safarto meel ka baxsan Syria.
Asma al-Assad, oo 45 jir ah, waxay ka soo jeeddaa qoys reer Suuriya ah oo deggan Ingiriiska, halkaas oo ay ku kortay xaafadda hodanka ah ee Aston ee caasimadda London, waxayna ka qalin jabisay King’s College London, si ay u noqoto falanqeeye dhaqaale ka hor inta aysan u guurin Syria sanadkii 2000 ka dib guurkeedii Bashar al-Assad.